၂၀၁၉ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးသော ထိုင်းဒရမ်မာဇာတ်လမ်းတွဲ (၁၀) တွဲ
Posted on - Aug 15 
ဒီဘက်ခေတ် ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတွေ အတော်များများဟာ ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်အိမ် ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်မှုနဲ့ ရိုက်ကွင်းအပြင်အဆင်သေသပ်မှုတို့တွေကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာသာမက အာရှနိုင်ငံတွေမှာပါ ကြည့်ရှုသူများပြားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ် ခိုင်ခံ့မှု၊ ပါဝင်ထားကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ပီပြင်မှုတွေကြောင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမနှစ်ဝက်မှာတင် ကြည့်ရှုသူတွေများပြားခဲ့ပြီး အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ (၁၀) တွဲကို တင်ဆက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆက်လက်ရှုစားကြည့်လိုက်ကြပါဦး။
1. Huajai Sila (ကျောက်ဖြစ်သွားသော နှလုံးသား)
၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမနှစ်ဝက်မှာတင် ကြည့်ရှုသူများပြားခဲ့ပြီး အအောင်မြင်ဆုံးသော ဒရမ်မာဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ခဲ့တာကတော့ Huajai Sila ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲပါပဲ။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြသူတွေကတော့ Tor Thanapob နဲ့ Fern Nopjira တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
2. Krong Karm (ကံကြမ္မာလှောင်အိမ်)
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြသူတွေကတော့ James Jirayu, Bella Ranee နဲ့ Mai Charoenpura တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
3. Klin Ka Salong
James Ma နဲ့ Yaya Urassaya တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ ရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်ကတည်းက နာမည်ကြီးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
4. Thong Aek Mor Yah Tah Chalong (ချလုံဆိပ်ကမ်းမှ သမားတော်)
ချလုံဆိပ်ကမ်းမှ သမားတော်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ပရိသတ်တွေအသိများတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ Mario Maurer နဲ့ Kimmy Kimberley Anne Voltemas တို့ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
5. Plerng Prang Tian
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာတော့ Toey Pongsakorn, Nychaa Nuttanicha နဲံ့ Pon Nawasch တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
6. Bai Mai Tee Plid Plew (လေလွင့်ရွက်ကြွေ)
ပရိသတ်တွေအကြားမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးထဲမှာတော့ Dj Push, Baifern Pimchano နဲ့ Saint Suppapong တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
7. Mon Garn Bandan Ruk
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အဓိကဇာတ်ဆောင်တွေအဖြစ်နဲ့ ပါဝင်ထားကြသူတွေကတော့ Mik Thongraya နဲ့ Bow Maylada တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
8. Poo Bao Indy Yayee Inter
Weir Sukollawat နဲ့ Stephany Aeurnig တို့ ပါဝင်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြသစဉ်အချိန်တုန်းက နာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။
9. Buang Sabai
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ New Wongsakorn, Green Ausadaporn နဲ့ Tubtime Anyarin တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
10. Sarawat Yai
Sarawat Yai ဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ Es Kantapong နဲ့ Preaw Tussaneeya တို့က အဓိကဇာတ်ဆောင်တွေအဖြစ်နဲ့ ပါဝင်ထားပါတယ်။
Ref : Thai Update
Dec42019 (22097 views)
Dec32019 (31056 views)
Dec32019 (25766 views)
Dec52019 (9290 views)
Dec52019 (17791 views)
Dec42019 (11980 views)
Dec42019 (19718 views)
Dec42019 (12092 views)